ခမျြးဧအိမျ: စုဆောင်းမိခဲ့သမျှ အဘိဓာန်များ (PDF)
PDF မြန်မာ အဘိဓာန်များ
ဦးဟုတ်စိန် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓာန်
ပြုစုရေးသားသူကတော့ ဦးဟုတ်စိန်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၁ မှာ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဦးဟုတ်စိန်ဟာ ဘီအေ (ဂုဏ်ထူး)၊ ဘီအယ်လ် ဘွဲ့ထူးများကို ရရှိထားတဲ့ ခေတ်ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒီစာအုပ်ကို ပြုစုဖို့ နှစ် ၃၀ ကြာ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူကလည်း သူကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ မဉ္ဇူသကစာပေက ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတယ်။ တင်ပြထားသူကတော့ ကိုရန်အောင် ဆီကပါ။
ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်သြဘာသာဘိဝံသ ရေးသားစီရင်သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေသည်။၂၀၀၇တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြီး PDF စာအုပ်အဖြစ် ဦးဖြူဝင်းမှ ထုတ်ဝေသည်။ ဗုဒ္ဓစာပေများကို အခြေပြုထားပြီး အတော်ပြည့်စုံသည့် မြန်မာလူမျိုးများ ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သည့် အဘိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
သက္ကတ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်ပါ။ မြန်မာလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ ကထုတ်ဝေထားတဲ့ ကျမ်းတစ်စောင်ပါ။
ဥပဒေရေးရာ ဝေါဟာရ အဘိဓာန်
ဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်သော စကားလုံးများကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဥပဒေအဘိဓာန်ပါ။ ဦးကျော်ဇေယျ ရေးသားပြုစုထားပြီး စစ်သည်တော်စာပေမှ ထုတ်ဝေထားတာပါ။ PDF Version တင်ပေးတာကတော့ ချယ်ရီသစ္စာ မှဖြစ်ပါတယ်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ရာဇသတ်ကြီး) ပုဒ်မများ နှင့်ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအဘိဓာန် နောက်တစ်အုပ်ပါ။ ဦးကျော်ဇေယျ ရေးသားပြုစု ထုတ်ဝေထားတာပါ။ PDF Version တင်ပေးတာကတော့ ချယ်ရီသစ္စာ မှဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးဆောင် မြန်မာ အဘိဓာန်
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာဦးစီးအဖွဲ့ဌာနကထုတ်တဲ့ ခရီးဆောင် မြန်မာ အဘိဓာန် လေးပါ။ PDF Version ပါ။ မူရင်းက အရှင်လောကနာထရဲ့ ဒဿန ခရီးစဉ် ဆီကပါ။
ဦးဆန်းလွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ခရီးဆောင် အဘိဓာန်(or)Google Doc
ဦးဆန်းလွင်(အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ရေးသားပြုစုထားတဲ့2in 1 Travellers မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူအဆိုအရ မြန်မာစာ မြန်မာစကားလို လေ့လာလိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာလို့သာ ပြောရတယ်။ တကယ်ရေးသား ထားတာတွေက မြန်မာအသံထွက် အင်္ဂလိပ်စာ Burglish တွေနဲ့ပါ။
An English and Burman Vocabulary By George.H.Hough (1825)
ဂျော့ဟောင်းက ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်မြန်မာ စာလုံးဝေါဟာရ စာအုပ်ကို စတင်ပြုစုခဲ့သူပါ။ သူရဲ့ ဝေါဟာရကျမ်းဟာ အဘိဓာန်ဖြစ်ဖို့ အဆင့်မလုံလောက်သေးပေမယ့်လဲ ဒါဟာလဲ ကျွန်တော်စိတ်ထင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ပထမဆုံးသော အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး လမ်းစတစ်ခုလို့တော့ ထင်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၄၂၄ မျက်နှာရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီရမ်ပိုလ်(Serampore)ကနေ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်။
A Dictionary, English and Burmese, Charles Lane (1841) Google Books
ပထမဆုံးသော အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓာန်ကြီးကို အင်းဝမြို့ နေပြည်တော်တွင် လာရောက်နေထိုင်သော Mr Charles Lane နှင့် မက္ခရာမင်းသားကြီး (၁၁၅၃-၁၂၀၀)တို့ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၈၃၀ ကနေ ပြီးတော့ ၁၈၃၅ ထိအောင် ရေးသားတည်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ၁၈၄၁ခုကြမှ India နိုင်ငံ Calcutta မြို့ မှာရှိတဲ့ သာသနာပြုစာပုံနှိပ်တိုက်မှာ ပုံနှိပ်ခဲ့တယ်တဲ့ အဲဒီ အဘိဓာန်ကို ဒီမိုင်း စက္ကူ ဆိုက်ကြီး နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး စာမျက်နှာ ၄၆၀ ပါဝင်သည်။ ဒီအဘိဓာန် အကြောင်းကို ကိုညီလင်းဆက် ဆီမှာလဲ ဒီလိုရေးသားထားပါတယ်။
Grammatical notices of the Burmese language By Adoniram Judson (1842)
ယုသဒန်က ၁၈၄၂ ခုနှစ်မှာ မြန်မာသဒ္ဒါ ဆိုပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့၏ မြန်မာစာ သဒ္ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းဆိုချက်များနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ ရ၆ မျက်နှာပါရှိပြီး ၁၈၄၂ ခု ဂျူလိုင်လတွင် မော်လမြိုင်ကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။ အဘိဓာန် မဟုတ်ပေမယ့်လဲ လေ့လာကောင်းမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။
Anglo-Burmese dictionary by George.H.Hough (1845) (or) Digital General Collection
ဂျော့ဟောင်းဟာ ၁၈၄၅ ခုနှစ်ကြမှပဲ သူကိုယ်တိုင် သူ့စာအုပ်ကို အင်္ဂလိုဘာမား အဘိဓာန်ဆိုပြီး နာမည်တပ်ခဲ့သော အဘိဓာန်စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာမျက်နှာ ၃၄၆ မျက်နှာရှိတဲ့ ဒီအဘိဓာန်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မော်လမြိုင်ကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။
A Dictionary English and Burmese By Adoniram Judson (1849) (First Edition)
ယုသဒန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို ပထမအကြိမ် ဇန်နဝါရီ ၁၈၄၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာမျက်နှာ ၅၈၉ မျက်နှာ ပါရှိပြီး သူခေတ်သူ့ကာလက သူ့အရင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ချာလိန်းအဘိဓာန်နှင့် ဂျော့ဟောင်းအဘိဓာန်တွေထက် အဘိဓာန် ဟုခေါ်ဆိုမှတ်ယူနိုင်တဲ့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်လှတဲ့ အဘိဓာန်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မော်လမြိုင်မြို့မှနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။
မြန်မာနှင့် မြန်မာလူမျိုးများ စာအုပ်ကို Kenneth Robert Henderson Mackenzie ကရေးသားသည်။ ၁၈၅၃ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာမျက်နှာ ၂၁၂ ပါရှိသည်။ မြန်မာပြည်အကြောင်းကို အင်းဝလက်ထက်မှ စပြီးဖော်ပြထားသည်။
English-Burmese dictionary By Adoniram Judson (1877) (Third Edition)
ယုသဒန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓာန်ကို နောက်ထပ်ပြီး ဒုတိယအကြိ်မ် (၁၈၆၆) ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်၊ တတိယအကြိမ် (၁၈၇၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ) မှာတစ်ကြိမ် မူလပထမ အဘိဓာန်စာအုပ်ကို စာလုံးအသစ်များ ထပ်မံဖြည်ပြီး ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးယုသဒန်ဟာ ၁၈၅၀ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့် ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိယအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းတို့မှာ သူကိုယ်တိုင် မဟုတ်သော်လည်း သူ၏ မူရင်းအဘိဓာန်များကို အခြေထားတဲ့အတွက် ယုသဒန်(ဂျက်ဆင်) အဘိဓာန်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားရတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်မိပါတယ်။ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းကို ရန်ကုန်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မူလ အဘိဓာန်ကို အခြေခံပြီး စာလုံးအဓိပ္ပါယ်အသစ် ၅၀၀ ထပ်ပေါင်းထည့်ထားသည်။ စာမျက်နှာ ၈၄၆ မျက်နှာရှိပါသည်။
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ စာလုံးဝေါဟာရ နှင့် ဘာသာစကားပြောစာအုပ်ကို Rev.C.Bennett က ပြုစုခဲ့သည်။ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းတွင် M.H.Eveleth က စိစစ်တည်ဖြတ်ပေးထားသည်။ ရန်ကုန်မှ ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ ၁၅၇ မျက်နှာပါရှိသည်။
Burmese Pocket Dictionary By Adoniram Judson (1887) PDF မူရင်းနေရာ (or) Digital General Collection
မြန်မာပေါ့ကဒ် အဘိဓာန်စာအုပ်ကို ယုသဒန်ရဲ့ အဘိဓာန်စာအုပ်မှ မှီငြမ်းကိုးကားထားပြီး အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာ ပြန်ဆိုမှုကို F.D. Phinney,M.A ဆိုသူက ပြုစုပြီး မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ်ကို F.H. Eveleth ဆိုသူက ပြုစုထားတာဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ ၃၈၆ မျက်နှာပါရှိပြီး ၁၈၈၇ ဇန်နဝါရီမှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
The Judson Burmese-English dictionary (1921) PDF မူရင်းနေရာ
ယုသဒန်၏ အဘိဓာန်ကို အခြေပြုပြီး Robert Charles Stevenson (1851- 1905) နှင့် Frederick Howard Eveleth(1843-1932) တို့က စီစစ်တည်းဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးမြန်မာ၏ အကူအညီများ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။စာမျက်နှာ ၁၁၃၅ မျက်နှာရှိသည်။ တကယ်အသုံးဝင် လေ့လာစရာကောင်းမွန်တဲ့ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
Historical Dictionary of Burma by Donald M. Seekins(2006)
ဗမာ့သမိုင်း အဘိဓာန်ကို Donald M. Seekins က အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါသည်။စာမျက်နှာ ၅၆၅ မျက်နှာရှိသည်။ Scarecrow Press မှထုတ်ဝေသည်။
မြန်မာ - ပြင်သစ်အဘိဓာန်(2004) မူရင်းနေရာ
စုဆောင်းမိခဲ့သမျှ အဘိဓာန်များ (Online)
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 11:14 PM
Labels: စာအုပ်များ, အဘိဓာန်
အင်္ဂါဟူး January 15, 2011 at 11:18 PM
ကျေးဇူးတင်တယ် ဦးလေရှာ... ကျွန်တော်လဲ ရှာဖွေနေတာပဲ.. ဦးလေးက မြုပ်နေတာကို တူးလိုက်မှ ပေါ်လာတယ်... အဘိဓါန်တွေ တစ်ပျော်ကြီးရဘီ
thein April 12, 2011 at 6:28 PM
Thanks I want to have Dr. Ba Han's English- Myanmar dictionary that is used in High Court.
ဦးညီ July 14, 2011 at 10:52 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ..ကျွန်တော်တို့လို စာအုပ်ချစ်သူတွေ အတွက် အရမ်းတန်ဖိုး ရှိလှပါတယ်.....